Tupac Shakur oo 20 sano kadib la ogaaday qofkii dilkiisa ka dambeeyay. - Celebrity News - Jilaa News - Falanqeynta Fanka iyo Fanaanka
Fanaankii raapka ee Mareykanka ee caanka ahaa ee Tupac Shakur oo sanadkii 1996 la dilay ilaa haatanna lagu wareersanaa ciddii ka dambeeysay dilkiisa ayaa waxaa ugu dambeeyn arrintaas shaaca ka qaaday Suge Knight oo ahaa ninkii lahaa shirkada muusiga sameysa ee Death row records kuna wehliyay 2pac gaarigiisa habeenkii la tooganayay ayaa sheegay in dilka lagu dilay fanaanka 2Pac uu ahaa mid asiga lala damacsanaa uuna Tupac si kama' ah ku dhintay.
Waxuu Suge Knight oo haatan xabsiga ku jiro arrinkani ku cadeeeyay filim dokumentari ah oo laga sameeyay noloshii 2 Pac asigoo carrabka ku dhuftay in falka dilkaasina ay ka dambeeyeen xaaskiisii xiligaasi Sharitha iyo ilaaliyahiisa qaaska ahaa eee Reggie White jr kaasoo uu sheegay inuu rasaasta ku furay Tupac oo asiga gacantiisa ku dilay.
Filimkaani oo taariikh badan oo ku saabsan arinkaasi xambaarsan ayaa dhawaan laga daawan doonaa shineemooyinka waxaana lagu magacaabaa All Eyes on me, taasoo aheyd eray baxin ka mid aheyd hees uu horey u qaaday fanaankii tupac.
Suge Knight ayaa haatan ku xeran xabsi asigoo kyu xukuman dhowr sano waxaana loo haystaa inuu isku dayay inuu dad dilo sidoo kalena uu gaari kor marsiiyay laba qofood.
Janet Jackson oo ay kala tageen ninkeedii ahaa milyaneerka Carbeed.